Muslimiin 3 saacadood oo kaliya soomaya iyo kuwo 21 saacadood soomaya!! - Caasimada Online
Home Warar Muslimiin 3 saacadood oo kaliya soomaya iyo kuwo 21 saacadood soomaya!!
Muslimiin 3 saacadood oo kaliya soomaya iyo kuwo 21 saacadood soomaya!!
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wadamad la isku yiraahdo Iskandanefiyaanka ee qaaradda Yurub hadii Muslimiinta ku dhaqan ayaa dhibaato xoogan ku qabaan fatwooyin is khilaafsan oo ku aaddan saacadaha ay soomayaan, maadaama qorraxda ay joogeyso 21 saacadood xiriir ah.
Waxaa jira dadaallo ay sameeyeen dad wadaada ah oo ay ku doonayaan in ay bulshada Musliminta ah ku mideeyaan, iyagoo xadidaya saacada la afurayo iyo saacada ugu dambeya ee la saxuuranayo, balse wali khilaafku wuu taagan yahay waxa uuna salka ku haya masaa’il fiqi ah.
Wadamada Carabta ayay dadka ku dhaqani soomaan inta u dhexeyso 17 ilaa 13 saacadood, waxaana ugu waqti dheer wadanka Al-Jazaa’ir oo laga soomo 16:58 daqiiqo halka Somalia ay tahay wadanka ugu waqtiga gaaban oo dadkeedu ay soomaan 13 saacadood, marka lagasoo tago Jazeerada WAKAN oo aan horey aanu usoo sheegnay in dadkeedu Soman 3 saac oo kaliya.